I-eBooks ye-Forex ye-Forex - Landa i-Free Forex Trading eBook
Khuphela i-Free Forex eBook
Uqoqo olubanzi lwee-eBooks zangaphambili ezibonelelwe nguFXCC. Kucingwa nje ngokuba yimithombo ephakamileyo efundwayo ye-intanethi efanelekileyo ekuthengiseni bonke abathengi kungakhathaliseki ukuba bafumana phi amava.
I-eBook ngayinye isikhokelo esipheleleyo esikukunceda uqonde iingcinga ezibalulekileyo zokuthengisa kunye nokwenza isicwangciso se-Forex yokurhweba esekelwe kwiinjongo zakho. I-FXCC njengenxalenye yenkqubo yayo yemfundo, inika i-eBook nganye mahhala.
Isicwangciso soShishino sokuLungisa ukuPhathisa indlela yokuphila KUKHULULA IBOOK FUNDA NGOKUGQITHISILEYO
Abathengi Mindset KUKHULULA IBOOK FUNDA NGOKUGQITHISILEYO
Yintoni ebalulekileyo xa kuthengiswa i-Forex ukuba neemvakalelo zakho zilawulwe. Le eBook izama ukuchaza amanyathelo okufikelela kwimeko yengqondo apho umntu unokuphelisa izigqibo zengqondo ezingakhokelela ekulahlekelweni kweentengiso kwaye ichaza amaphulo okumele alandelwe ukuze kuphuhliswe isicwangciso sokuthengisa esiphumeleleyo.
Management Money KUKHULULA IBOOK FUNDA NGOKUGQITHISILEYO
Le eBook ichaza ukubaluleka kokufezekisa ukuphathwa kwemali njengenxalenye ebalulekileyo yecebo lokuthengisa. Izibonelo zinikezelwe ngeziphumo kunye nemiphumo yokulawulwa kokungalungi kunye nokungalunganga, kunye nendlela ukuyeka ukukhusela i-akhawunti yokurhweba nokugcina ilahleko.
Ulungelelwano ngokuSebenza KUKHULULA IBOOK FUNDA NGOKUGQITHISILEYO
Ivenkile ye-forex yemarike yathengisa kwiminyaka yamuva kwaye iintlobo ezininzi ze-broker ziye zavela. Le eBook iya kugxila kwi-STP -Straight Through Processing kunye neenzuzo zalo mzekelo kubaxhasi.
Indlela yokwakha iSicwangciso soShishino sokuSebenza KUKHULULA IBOOK FUNDA NGOKUGQITHISILEYO
Uhlalutyo lobuGcisa kunye nolwaSiseko KUKHULULA IBOOK FUNDA NGOKUGQITHISILEYO
Ukuba nobuchule obunzulu ekuhlalutyweni kwemakethi kufumaneke ngabathengisi ngabanye abanesabelo kunye nokuzinikela kwiinjongo zabo zokurhweba. Le ncwadi yinkcazo emfutshane kwimimandla eyahlukeneyo yorhwebo kunye nezobugcisa.
Ukusetyenziswa kweeNqununu zeMiqathango KUKHULULA IBOOK FUNDA NGOKUGQITHISILEYO
Imarike ye-FX ihlala ihamba kwaye ifuna ukulawula okufanelekileyo ukwenzela ukuthintela ukuba kukho enye ishishini ekukhohliseni amava abo okurhweba. Funda indlela yokukhawulela nokulawula ilahleko zakho ngokusebenzisa ngokufanelekileyo imiyalelo yokuyeka.
Isicwangciso sakho sokuThengisa KUKHULULA IBOOK FUNDA NGOKUGQITHISILEYO
Isicwangciso sakho sokurhweba senza umgangatho wokusebenza kwakho, kufuneka uqulethe izinto ezibalulekileyo eziza kuxhasana nemigudu yakho yokuthengisa kunye neenjongo. Isicwangciso akumele sibe ngumqulu oqatha kakhulu ekuqaleni. Funda indlela yokwenza isicwangciso sakho sokuthengisa.
Isingeniso kwi-Basics of Price Action Trading KUKHULULA IBOOK FUNDA NGOKUGQITHISILEYO
Isizathu esinqununu abaninzi abahwebi abanamava bayakukhuthaza ukuthengiswa kwe-PA, kuba kuba bajonga intengo njengowodwa, uphawu olubalulekileyo, kumatshati kunye nexesha. Bajonga intengo kunye nexabiso lentengo eqhubeka njengesiphumo, njengesalathisi esikhokelayo, kungekhona isalathisi sokungena.
Scalping njengeCandelo loRhwebo KUKHULULA IBOOK FUNDA NGOKUGQITHISILEYO
I-Scalping yindlela yokuthengisa engaqondakaliyo kwaye engaqondakaliyo. Abaninzi abathengi abanamava baya kuklashula nje ngokuzama ukufumana i-pip encinci yebhanki encinci, kwixesha elifutshane. Nangona kunjalo, oku kungumthamo wemvelaphi yokusikwa njengento kwaye ichaza indlela inkcazo eguquke ngayo ngokuhamba kwexesha, ingakumbi ngexesha lokuphuhlisa intengiso ye-intanethi.
Usuku lokuthengisa njengendlela yokuthengisa KUKHULULA IBOOK FUNDA NGOKUGQITHISILEYO
Njengendlela kunye nendlela yokuthengiswa, ukuhweba kwamasuku yenye yeendlela ezithandwayo zorhwebo kwaye mhlawumbi indlela yokuthengisa apho ininzi yabathengisi beentengiso kulindeleke ukuba ekugqibeleni bahlanganyele, okanye bathukele phezulu, kanye (kwaye ukuba) banokutshintsha umsebenzi wabo kwaye ekugqibeleni bazinikezele ixesha elipheleleyo, kumsebenzi kunye noshishino.